घरबेटीले श्रीमानको ह ‘त्या गरेपछि नितुको चित्का,र- अब हामीलाई क,सले हेर्छ ? (भिडियो सहित) – पुरा पढ्नुहोस्……
घरबेटीले श्रीमानको ह ‘त्या गरेपछि नितुको चित्का,र- अब हामीलाई क,सले हेर्छ ? (भिडियो सहित)
काठमाडौं– सुरुमै पी’डित पक्षले आग्रह गरे– यो ठेगाना चाँही नलेखिदिनुस् है, फेरि यहीँ आएर मा’र्लान् । आइतबार दिउँसो ४ बजे तिर सानो गल्लीबाट छिर्दै केराको गोदामले भरिएको घरको तेश्रो तल्लामा चढेप छि हामी उनको कोठामा पुग्यौँ । वरिपरि तरकारी राख्ने क्यारेट, केही थान डोका छरपस्ट थिए । छेवैमा थियो, फलफुल बोक्ने एउटा पुरानो साइकल ।
र, भुईमा आफ्ना तीन छोरा सहित ओछ्यान लगाएर सुति रहेकी थिइन्, नितु महतो । ‘मलाई थाहा छैन, हाम्रो शम्भु कहाँ छ,’ श्रीमान्को ह,त्या भएको दुई दिनपछि रुँ’दारुँदा ग’लिसकेको स्वरमै भएपनि उनी बोलिरहेकी थिइन्, ‘ न हाम्रो घर छ, न केही । मेरा तीनटा बच्चा छन्, अब यिनीहरुलाई कसले खान दिन्छ, कसले पढाइदिन्छ ? मलाई मेरो शम्भु चाहिन्छ ।’
पतिको ह,त्या यता उनले केही खाएकी छैनन्। सिर्फ, श्रीमानको न्या’यका खा’तिर चि’च्याइ रहेकी छिन्, जोड-जोडले रो’इरहेकी छन्। ‘म केस ल’डेरै छाड्छु, मेरो श्रीमान् मा,र्नेलाई फा,सी दिलाएरै छाड्छु,’ अ’वरुद्ध ग’लाकै सहारामा उनी हामी सँग बोल्न तयार भइन्, ‘मलाई पैसा-कौडी केही चाँहिदैन, शम्भु चाहिन्छ।’
बारम्बार उनी हामीसँग एउटै कुरा दोर्याइरहेकी थिइन्, ‘अब कसले हेर्छ हामीलाई। मलाई केही चाहिँदैन, मलाई शम्भु चाहिन्छ।’ शुक्रबार दिउँसो डेरावालको कु,टपिट र आग्लो प्र’हारबाट नितुका श्रीमान शम्भु महतोको मृ,त्यु भयो। काठमाडौं, कीर्तिपुर-६ स्थित भाजंगलमा स्थानीय प्रेमकृष्ण महर्जनको घरमा करिब १४ महिनादेखि श्रीमती र तीन छोरा (१५, १२ र ५ वर्षीय)सहित शम्भु डेरामा बस्दै आइरहेका थिए।
दुइटा कोठा लिएका थिए, प्रति महिनामा चार हजार रुपैयाँ भाडा तिर्थे । ४२ वर्षीया शम्भुको खास घर भारत मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण ग्राम पोष्ट संग्रामपुर वडा नं ५ मा हो। करिब २२ वर्ष देखि उनी कीर्तिपुरमा कहिले माइक्रोका सहचालक त कहिले घर बनाउने मिस्त्रीको काम गर्दै पाँच जनाको परिवार चलाउँदै आइरहेका थिए।
Prev८ बर्षिया बालिका प्रेन्सा रेग्मीको यति महान काम (भिडियो)
Nextएका बिहानै पाथिभरामाताको दर्शन गर्दै भाद्र ३० गते मंगलबारको राशिफल पढ्नुहोस ! भेटी स्वरुप एक से, यर गर्नुहोस !
भद्रगोलका चर्चित एवं मुख्य पात्र बले र रक्षालाई “टिकटकले डुबायो” -हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
विहानैदेखि हावाहुरीसँगै पानी आएसँगै, सम्भावित दुर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै विद्यालय बन्द !
ध्रुब प्रसाद अ्म्गाईको शब्द हरी लम्साल को सङीत र सनुप पौडेल को स्वरले ततायो नेपाली म्युजिक बजार-हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
नेपाली फिल्ममा डेब्यु गर्दै तेरिया मगर , यी हिरोसंग गर्दै छिन फिल्म (भिडियो सहित)